Sidee ayaan u isticmaalaa Adobe jilitaankii geliyaan YouTube Videos? t
Inkastoo helitaanka tafatirka iyo post shaqada oo kaliya xaq u mashruuc kasta waa waxa aan dhamaanteen ujeedadoodu tahay, ujeedada ugu danbaysta ahi waa in dadka kale si ay u arkaan curiyay our, iyo habka ugu caansan si loo gaaro in uu yahay YouTube. Fursadda yihiin, haddii aad soo saara video, waxaad la gelinaya doonaa qaar ka mid ah waxaa ka mid ah on YouTube meelaha qaar, si aynu isla eegno sida ugu hufan si ay u helaan shaqo aad ka jilitaankii in YouTube.
Ka hor inta dhoofinta shaqadaada, waxaa muhiim ah in marka hore la abuuro nuqul oo ka mid ah mashruuc ay tahay 'sida uu yahay', in waxay muujinaysaa goobaha iyo codecs loo isticmaalo in muuqaalka asalka ah.
Si tan loo sameeyo waxaad si fudud u dooro xigxiga gudahood Timeline ama Panel Mashruuca, iyo maraan geed menu via File> dhoofinta> Media inay soo qaadaan wada hadalka dhoofinta.
In la abuuro aad Master Copy, si fudud u dooro ikhtiyaarka ugu horeeyey ee kulanka iskugu xigxigaan Settings ", taas dhoofisa file a in uu yahay mid tayo la mid ah sida aad muuqaalka asalka ah, muhiimad soo saaro nuqul digital shaqada ee archiving ka hor wax kale ayaa la sameeyaa.
Iyada oo aad ammaan u shaqeeyaan iyo aamin ay hadda tahay markii si loo eego in la hubiyo mashruuca ku haboon yahay YouTube. Iyada oo aynu isku xigxiga xulay in Timeline ama Project Panel mar kale, waxaan maraan isla File> dhoofinta> Media Jidka inay soo qaadaan wada hadalka warbaahinta dhoofinta sidii hore.
Ikhtiyaarka hore waxa aannu ka fikiraynaa waa qaab file in video dhammeeyayna ay u baahan tahay in ay ku sugan. Halkan waa in aad eegtaa YouTube tilmaamaha ay, halka ay sameeyaan aqbali tiro ka mid ah qaabab file, qodaya marayo nidaamka YouTube caawimaad si aad u ogaato goobaha for ugu sareeya tayada aan ogaanno in ay ku taliyaan MPEG4 sida weelka, iyadoo la isticmaalayo codec H.264 ah.
Waxaan sidoo kale ka arki kartaa goobaha dheeraad ah lagu talinayaa in shaashada in goor dambe la hadli doonaa.
Warka wanaagsan waa in si toos ah jilitaankii doorteen weel ku haboon ayay noo tahay marka ay doortaan codec our, si kastaba ha ahaatee waa faaligga nooca file YouTube ayaa filaya kaliya in aad naftaada ka fiiri.
Sidaas isagoo aasaasay in YouTube talinaysaa weel MPEG4 isticmaalaya H.264 codec ah, ikhtiyaarka ugu horeeyay ee aan u baahanahay in la raadiyo wada dhoofinta warbaahinta waa in ay doortaan qaab ku habboon.
Tani waa dhibicda hore ee sanduuqa wada hadalka, oo ay dhacdo in this aan si fudud u dooro H.264 ka mid ah liiska.
Marka aad doorato H.264 waxaad eegi kartaa magaca saarka 'berrinkii iyo arko Ciyaar in si toos ah loo dhigay file wax soo saarka si ay u .mp4 taas oo dhab ahaan waxa aynu u baahan tahay.
Beertii soo socda waxaan u timid inaad tahay 'horena' ah dropdown menu. Tani waa kaalmo weyn in dadka intooda badan, sida Adobe ay aad u naxariis leh waxaa ka mid ahaa tiro badan oo presets in ay si deg deg ah ula qabsan goobaha video, si loo waafajiyo isticmaalka gaarka ah. Waxay kala duwan yihiin waxay ku xiran tahay nooca saxda ah ee Ciyaar aad isticmaalayso, iyo mid kasta oo nooca qaab haysan liiska presets, H.264 sida aan ka arki kartaa leeyahay tiro badan oo u YouTube, laakiin sidoo kale waxa uu presets badan qalabka gaar ah (presets u iPad, shidin, Nook, kiniiniga kala duwan oo kale oo telefoonada, vimeo iyo Koox ka mid ah kuwa kale) si loo helo goobaha xaq in si fudud uu qaniinay noo.
Waxaa muhiim ah in halkan ay doortaan horena saxda ah ka fursadaha kala duwan ee YouTube. Waxaad doonaysaa in ay doortaan heerka xallinta iyo jir u dhigma aad file il, natiijada ugu fiican. Sidaas darted, haddii aad file isha waa 1080p heerka jir ah 29,97 fps ah markaas in uu yahay YouTube u dejinta aad ka dooran lahaa.
Marka horena laga soo doorto kooban ee goobaha hoos lagu soo bandhigay, sida caadiga ah waxay noqon doontaa habboon in aad mashruuc, si kastaba ha ahaatee waxaad ganaaxi karaa wax habayn aad rabto inaad doorataa video ama maqal ah isha ugu hooseysa kaas oo ku siin fursad ay ku qabsato kasta Halbeegga si gaar ah. Haddii aad sidaan sameyso, waxaad badbaadin kartaa isbedel sida caado horena by riixaya badhanka ee dhinaca dropdown menu horena oo si fudud u isticmaali mashaariicda dib u doorashada ka mid ah liiska la mid ah sida oo kale oo kasta oo, waqti fiican qalab lagu badbaadinayo .
Marka aad ku qanacsan tahay goobaha, waxaa laga eego oo keliya ama haddii aad adigu iskaa u beddelo wax, aad tahay ku dhawaad ​​diyaar u ah inay ka abaalmarin file oo u dhoofin.
Wixii YouTube waxaa lagu talinayaa in aad dooro 'Isticmaal ugu badan siiya Tayada' doorasho si ay u ilaaliyaan wax soo saarka ugu fiican ee aad awoodo, waxa aanu ku darto waqtiga geedi socodka la moodo, laakiin haddii aad u qiimeeyaan tayada shaqadaada waa qiimo.
Aad Ugu dambeyntii dooran kartaa filename habboon iyo caga of faylka adigoo gujinaya ah 'Output Magaca "field.
Waxaan si caadi ah u isticmaalaan filename ah oo ay ku jiraan dhexdhexaad caga si aan kala nooc oo kala duwan oo ah mashruuc oo og taas oo ka mid geliyaan meesha, haddii ay taasi waxaan ka mid ah 'youtube', laakiin haddii aan qorsheynaynay on uploading clips ka mid ah mashruuca si vimeo sidoo kale, tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in la dhimo mashruuca la 'vimeo' magaca aad. Caga waa jecel yahay, maxaa yeelay, waan samayn isticmaali filenames in la kala saaro versions waxaan gelin kartaa iterations kala duwan galay file ah mashruuc hal, kuwa kale waxay leeyihiin qaab-dhismeedka galka nooc kasta oo file, sidaa oo dhan wax soo saarka YouTube galaa folder hal iyo wixii la mid ah, sida aad abaabulo oo gebi ahaanba ku tiirsan tahay sida aad u shaqayso.
Marka kuwa la doortay magcaabo 'dhoofinta' hannaanka haya'ad waxay ka bilaabantaa, iyo ugu dambayntii (inta ay ku xiran tahay xawaaraha aad computer iyo xajmiga iyo nooca file ku lug), waxaad la kulmi doonaa la filaayo in aad YouTube video meel aad dooratay.
Hadda waxaad haysataa aad file, tallaabada xigta waa in ay tagaan in aad xisaabta YouTube iyo gasho haddii aad u baahan tahay in.
Dhinaca sare ee aad homepage on xaq yahay button Upload ah, xulashada in keeni faylka menu xulo sida hoos.
Waxaad jiidi kartaa file galay daaqadda ama guji si aad u furi browser caadiga ah file in ay helaan faylka la doonayo, guji iyo Upload ka bilaabi doonaan. Dropdown The hoose kuu ogolaanayaa inaad si ay u dejiyaan video sida Dadweynaha, la xiri doono ama Private. Waad beddeli kartaa waqti kasta mar video la uploaded sidoo.
Waxa uu kuu furayaa suuqa kala horumarka Upload, halkaas oo aad ku dari kartaa in magac, sharaxaad iyo tags iyo sidoo kale dar video ay u playlist ama qabsadaan goobaha gaarka ah sida video waa inaad koombiyuutarka.
Marka Upload sida dhamaystirtay, aad samayn karto hagaajin final in goobaha iyo dooran thumbnail ah ee video ah. Tallaabada ugu dambaysaa waxay tahay inaad riix 'naadiya' button iyo video looga baaraandegi doonaa oo waxaad tagtaa nool.
> Resource > YouTube > Sidee ayaan u isticmaalaa Adobe jilitaankii geliyaan YouTube Videos?